Dowladda Faransiiska Oo markii ugu horeysay ka hadashey xaaladda Xaftar. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Faransiiska Oo markii ugu horeysay ka hadashey xaaladda Xaftar.
On Apr 19, 2018 197 0
Markii ugu horeysay dowladda Faransiiska ayaa si guud uga hadashey xaaladda dagaal oogaha mujrimka ah Khalifa Xaftar, kaas oo lagu dabiibayo isbitaallo ku yaala gudaha wadanka Faransiiska.
Idaacadda Faransiiska ayaa kasoo xigatay wasiiru dowlaha arimaha dibadda ee Faransiiska in Khaliifa Xaftar lagu daweynayo isbitaal ku yaala duleeedka magaalada Paris oo ay leeyihiin milliteriga Faransiiska.
Wasiiru dowlaha ayaa sheegay in xaaladda Khaliifa Xaftar ay tahay mid wanaagsan, oo kasoo reyneysa, waxaana hadalkan uu noqonayaa markii ugu horeeyay oo dowladda Faransiiska xaqiijiso in dagaal ooge Xaftar lagu dabiibayo gudaha wadankeeda.
Hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo dhawaanahan la isla dhexmarayay warar sheegaya inuu Khaliifa Xaftar ku geeriyooday Isibtaal ku yaala wadanka Faransiiska, waxaana warkaas oo u muuqday mid waxba kama jiraan ah ku farxay muslimiinta gaar ahaan reer Liibiya oo uu mujrimkan dhibaato ba’an u gaystay.